Nnwom 76 AKCB - Mateo 76 MTDS
1Onyankopɔn din ahyeta wɔ Yuda;
ne din so wɔ Israel.
2Ne ntamadan si Salem,
ne tenabea wɔ Sion.
3Ɛhɔ na obubuu mmemma a ɛpa gya,
nkatabo ne afoa, akode nyinaa mu.
4Wo ho hann no hyerɛn,
na woso sen mmepɔw a mmoadoma ahyɛ mu ma no.
5Mmarima akokodurufo deda hɔ a wɔagye wɔn ho nneɛma,
wɔadeda awufo nna;
na akofo no mu baako mpo
ntumi mma ne nsa so.
6Yakob Nyankopɔn, wokaa wɔn anim no
apɔnkɔ no ne nteaseɛnam no adeda dinn.
7Wo nko ara na ɛsɛ sɛ wosuro wo.
Sɛ wo bo fuw a hena na obetumi agyina wʼanim?
8Wubuu atɛn fii ɔsoro,
asase suroe, na ɛyɛɛ komm,
9bere a wo, Onyankopɔn, sɔre buu atɛn,
de gyee amanehunufo wɔ asase no so no.
10Ampa ara wʼabufuwhyew a etia nnipa no de ayeyi brɛ wo,
na wɔn a wotumi gyina ano no nya kɔkɔbɔ.
11Monhyɛ Awurade mo Nyankopɔn no bɔ na munni so;
momma nsase a atwa ne ho ahyia
mfa ayɛyɛde mmrɛ Ɔbaako a ɛsɛ sɛ wosuro no no.
12Ɔbrɛ sodifonom honhom ase;
na asase so ahemfo suro no.
AKCB : Nnwom 76